Singobani-iSichuan Wenyu Electric Co., Ltd.
NGUBANI WEIYU UMBANE?
I-Weiyu Electric, yinkampani ephethwe ngokupheleleyo yinkampani edwelisiweyo (iKhowudi yeSitokhwe: 300820) -Sichuan Injet Electric Co, Ltd. Ngabasebenzi abangaphezu kwama-500, iworkshop ezingama-22000 ㎡ ezingezothuli, izatifikethi ezili-169 zamalungelo awodwa omenzi wechiza, amava eminyaka engama-24 kumbane Umzi mveliso wamandla, i-Injet ifumene indumiso ephezulu evela kumashishini awaziwayo kwilizwe liphela kwiimveliso eziphambili kunye nenkonzo efana neABB, Siemens, Schneider, GE, GT, SGG njl
Sinomdla kwindalo nakwingxaki, sizinikele ekuzalisekiseni isithembiso sethu kumthengi ngamnye kwiprojekthi nganye. Someleza intsebenziswano neyunivesithi kunye nophando, kwaye sizinikele ekuphuculeni amava abathengi kunye nezinto ezintsha kwitekhnoloji. Akukho nto inokusiyekisa ukwenza indalo ilula kwaye isebenze.
Eyasungulwa ngo-2016, i-WEIYU yi "EVSE" (i-Electric Vehicle Supply Equipment) uphawu lweSichuan Weiyu Electric Co., Ltd. abazinikezele kwizinto ezintsha, umgangatho kunye nokuthembeka kwimimandla yoshishino lwamandla. Ngomzamo oqhubekayo we-R & D yobungcali kunye neQela lokuThengisa kunye neNkonzo, u-Weiyu Electric sele ekwazi ukuvelisa zonke iintlobo zezikhululo ze-EV kunye nokubonelela abathengi ngesisombululo esipheleleyo sokutshaja. I-OEM kunye ne-ODM okanye uncedo lwesicelo sobunjineli ziyafumaneka.
Ngexesha lokuvelisa kunye nemveliso yemihla ngemihla, yonke inkqubo ihambelana neNkqubo yoQinisekiso loMgangatho ye-ISO 9001.
Izinto zethu eziphambili zenziwe kwinkampani kamama -Injet Electric, ene-22000 ㎡ indawo yokusebenzela engenothuli, Zonke iinkqubo zinemigangatho ephezulu yokuqinisekisa umgangatho wemveliso. Izinto zombane ziya kugcinwa kwindawo yokugcina izinto ezinomswakama. Yonke ibhodi yesekethe iya kupeyintwa ibe bubungqina bokuswakama, ukungabinothuli, ukuthandazela ityiwa, kunye nokuchasana nokuma.
Inxalenye yesoftware iqulethe ibhodi yesekethe, inkqubo yolawulo kunye nomlawuli. La malungu mathathu aneenkqubo zawo ezizodwa zokuvelisa, ekufuneka zilandelwe ukuqinisekisa ukuthotyelwa ngokupheleleyo kwemfuno zoyilo.
Yonke isoftware kunye nezixhobo ze-Hardware zinokulandelwa kwaye zilandelwe ngenombolo ye-serial, umhla wokuhanjiswa, irekhodi lovavanyo, irekhodi lokufuna izinto eziphathekayo, irekhodi yovavanyo lwempahla eluhlaza kunye nokurekhodwa kwempahla eluhlaza. Konke esikwenzayo kukuqinisekisa umgangatho wokwanelisa iimfuno zabathengi bethu.
Ezizimeleyo I-R & D
Sinamaqela eR & D oqeqeshiweyo anamandla okuphuhlisa amandla. 51 amalungelo awodwa omenzi wechiza sele esetyenzisiwe, kwaye inani liyaqhubeka ngokukhula.
Ukutshaja ipetroli Ev, Ukutshaja iiMoto zombane, Isikhululo se-Ev Charge, Ukutshaja kweZithuthi zoMbane ngePlagi yesi-2, Izikhululo zeEv Charge, Isitishi sokutshaja i-Ev,